मेयर हुनु त बालेनजस्तो, काठमाडौंबासीमा खुसीको बहार छाउनेगरी फेरि एकपटक आफूलाई गरिदिए प्रमाणित ! | Prahar News
मेयर हुनु त बालेनजस्तो, काठमाडौंबासीमा खुसीको बहार छाउनेगरी फेरि एकपटक आफूलाई गरिदिए प्रमाणित !
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन शाहले आफूलाई फेरि एकपटक प्रमाणित गरिदिएका छन् । ब्याक टु ब्याक जनताको पक्षमा बोल्ड निर्णय गर्दै आइरहेका बालेनले आफूलाई फेरि एकपटक प्रमाणित गरिछाडेका हुन् ।
बालेनले काठमाडौंका आफ्ना मतदाता र यहाँ स्थायी रुपमा बसोबास गर्नेहरुलाई खुसीको खबर दिएका छन् । काठमाडौँवासीमा खुसीयाली छाउनेगरी उनले आफ्नो गज्जबको कार्यकुशलता प्रदर्शन गरेका छन् ।
सिद्धान्त हामीले स्वीकारेका छौँ – भूमिका केही फरक होला तर हामी सबै जनप्रतिनिधि हौँ । हाम्रो उद्देश्य काठमाण्डौँको समृद्धि र नागरिकहरूको सुविधाको बढोत्तरी मात्रै हो । व्यवहारतः हामीले प्रमाणित ग¥यौँ – यो अभियानमा हामी सबै साथसाथ छौँ ।